Iimidlalo ezili-15 ze-rpg ze-iphone kunye ne-android (uhlelo luka-2015)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Imidlalo eli-15 ebalaseleyo ye-RPG ye-iPhone kunye ne-Android (ushicilelo luka-2015)
Imidlalo eli-15 ebalaseleyo ye-RPG ye-iPhone kunye ne-Android (ushicilelo luka-2015)
Isenokuba asikabi nayo i-Diablo ye-Android kunye ne-iPhone, kodwa oku akuthethi ukuba azikho ii-apn; umdlalo othile wokudlala indima (RPG) kwiselfowuni. Singena nzulu kubunzulu beGoogle & Apos; s Ivenkile yeVenkile kunye neVenkile yeApple yeApple ukufumana eyona midlalo ilishumi elinesihlanu yeRPG onokuyidlala ukuza kuthi ga ngoku ngo-2015.
Ngelixa kukho uninzi lwe-RPG yoqobo ekhutshiweyo ye-iPhone kunye ne-Android, akunakwenzeka ukwenza ujikelezo olunje ngaphandle kokukhankanya ezinye zeeklasikhi zePC ezisandula ukulungelelaniswa nezikrini zokuchukumisa. Enkosi ngokusebenza ngokungaguquguqukiyo kwezitudiyo zomdlalo ezinje nge-Square Enix, iindaba ezimnandi zezokuba sinomdlalo odumileyo weSuper Nintendo (SNES) wokugqibela weFantasy okhoyo kwi-Android nakwi-iOS. Kolu luhlu, thina & apos; sizamile kananjalo ukunika ingqalelo kwizinto ezithe zakhutshwa kutshanje ezingalalanisi kumgangatho, kodwa ukuba ukhe wakhupha i-RPG oyithandayo, ungathandabuzi ukwabelana ngamagama kwicandelo lamagqabaza apha emazantsi inqaku.
Ngaphandle kokwenza enye iado, lixesha lokuba uqale ngokubala: Nazi ezona midlalo zili-15 zibalaseleyo ze-Android kunye ne-iPhone RPG ukuza kuthi ga ngo-2015.
# 15: Indlela eya eDragons
Ixabiso: Simahla (ngokuthenga ngaphakathi nohlelo): Khuphela kwi ios , I-Android
Indlela eya eDragons ayikhanyisi ngamabali aqaqambileyo- umkhosi omangalisayo kunye nobubi uGorger Dragons uthatha umhlaba, awushiye ebumnyameni iminyaka eli-17, de kubizwe iqhawe ukuba lisindise abantu kubuzwilakhe, kodwa Ukudlala umdlalo kuyabandakanyeka. Uninzi lwezenzo kwiNdlela eya eDragons zibekwe kumabala emfazwe afana nechess azaliswe zizilo kunye neebhokisi zexabiso, apho ukhetha enye yeendlela ezisibhozo ezinokubakho. Kuya kufuneka ukhethe isicwangciso esiliqili sokulwa kwaye kukho abaphathi benamba (kwaye inkwenkwe, zinkulu) ekupheleni kwesahluko ngasinye, kwaye konke kusebenza kumdlalo weqonga omnandi wesihloko sasimahla.
Indlela eya eDragons
# 14: Tshintsha amaHero 2
Ixabiso: $ 2.99: Khuphela kwi ios , I-Android
Ukutshintsha amaHero 2 inemowudi yemfazwe enomdla apho uswayipha khona ukuze utshintshe iqhawe lakho kwaye ukhethe uhlaselo olufanelekileyo, kwaye ngumdlalo odlala indima omangalisayo apho wenza iqela lakho kwaye ulikhokele kwimishini eyahlukeneyo. Ngamagorha awodwa ayi-8, ngaphezulu kweendawo ezili-10, kunye nangaphezulu kweentlobo zeentshaba ezahlukeneyo ezingama-30, ufumana imali eninzi kutyalo-mali lwakho lweedola ezintathu.
Ukutshintsha amaGorha 2
# 13: Ingcuka eyedwa kaJoe Dever
Ixabiso: $ 0.99: Khuphela kwi ios , I-Android
I-mashup yencwadi yomdlalo kunye ne-RPG, uJoe Dever kunye ne-Apos's s Lone Wolf inemizobo emikhulu kunye nebali lokuntywilisela elijikeleza iLone Wolf, igorha elinamandla elinamajoni kunye namanye amathambo kwigunjana lalo ngendlela yexesha elidlulileyo (kwaye langoku). Kumthetho 1, uqala ukukhulisa iqhawe lakho kwaye eso kuphela kwesenzo osifumanayo ngexabiso le- $ 1, ngelixa umthetho 2, 3, kunye no-4 wena & apos; d kufuneka ukhuphe i $ 4.99 eyongezelelweyo ngesenzo ngasinye. Siyayithanda inkqubo yedabi kwiLone Wolf, kunye nobumnandi bayo (yona & apos; iyafana namadabi kwiFantasy yokuGqibela), kwaye ibali liqala ukujija emva kwesenzo sesibini.
Ingcuka eyedwa kaJoe Dever
# 12: ezantsi
Ixabiso: $ 1.99: Khuphela kwi ios , I-Android
I-Lowlander ngumdlalo ophefumlelweyo kuthotho lwe-Ultima. Kuyo, udlala indima yomhambi-indawo oba ngumkhweli, kwaye kufuneka azalisekise imibuzo eyahlukeneyo evela kukumkani. Ngehlabathi elikhulu lokuphonononga, lizaliswe yimingxunya kunye nokuphanga, umdlalo uziva ugcwele amathuba, kwaye ulawulo lwenziwe kakuhle kwizikrini zokuchukumisa, ukuze ukwazi ukudlala ngesandla esinye.
# 11: Siralim
I-Siralim luhlobo olwahlukileyo lwe-RPG ngaphandle kwesiphelo. Inento yedabi esekwe ekujikeni, kodwa ikwakhona malunga nokwakha isiseko kunye nokuzingela i-loom kwimingxunya eyenziwe ngokungekho mthethweni. Khetha injongo yakho, kwaye uqiniseke ukuba umdlalo uya kuqhubeka nokuphosa abaphathi abanzima kunye neendlela ezintsha zokuhlola.
# 10: SwapQuest
Ixabiso: $ 2.99: Khuphela kwi ios
Ukungena kwii-10 eziphezulu, i-SwapQuest inendawo evelele, ibe ngumdlalo omkhulu we-puzzle / umdlalo we-RPG. Kulo mdlalo, ukhokela iqhawe lakho kwicandelo elinethayile ngakwindlela yokuphuma, kunye nokutshintsha iithayile kukuvumela ukuba utshintshe indlela kwaye uqokelele ukuphanga ngakumbi, okanye uphephe iingozi. Yongeza into yokuqokelelwa kwegugu oyisebenzisayo ukuthenga iqhawe lakho izixhobo ezintsha kunye nezixhobo, kwaye uqala ukufumana umbono weSwapQuest. Ukwanayo nenkqubo yokulinganisa, abaphathi abanzima ukubetha, kunye nokuninzi ekufuneka ukwenzile ukukugcina ungonwabisi ngaphandle kokudikwa.
# 9: I-Evoland
Ixabiso: $ 4.99: Khuphela kwi ios , I-Android
I-Evoland kukufika okutsha kweePhones kunye nezixhobo ze-Android, kwaye ngumdlalo wokuqala onomdla one-leitmotif yokuhamba wena kwimbali yokudlala. Kule thoni, umdlalo uqala kwi-monochrome, kwaye ngokukhawuleza uguquke ukufaka umbala, ukuhamba ngokukhululekileyo, iimfazwe kunye nokunye okuninzi. Siyixabisile i-Evoland ngokuhlonela izihloko zangaphambili, kodwa kwanombono wayo wokuqala.
# 8: Icewind Dale: uHlelo oluPhuculweyo
Ixabiso: $ 9.99: Khuphela kwi ios , I-Android
I-Icewind Dale sisihloko esiqhelekileyo esakhutshwa okokuqala kwiWindows kwiminyaka eli-15 eyadlulayo ngo-2000. Abadlali abadala (njengathi) baya kuwukhumbula umgca webali, kodwa nantsi into ekhawulezayo yokuhlaziya abo bafikayo: konke kuqala emva kokudalwa kweqela labakhenkethi (ungakhetha ukuya kumaqhawe amathandathu eentlanga ezahlukeneyo kunye neeklasi oza kuthi emva koko uziphuhlise) eziba ngumlindi wekharavani njengoko kusenzeka izinto ezingaqhelekanga. Ibali liyazululeka ukuveza ubutshaba beedemon obusongela iidolophu ezilishumi ze-Icewind Dale, kwaye indima yakho yeyomhlanguli.
# 7: Isango 2 leBaldur: uHlelo oluPhuculweyo
Elinye itayitile ye-PC yesiqhelo ukusuka kweli xesha legolide lee-RPGs ezazingunyaka ka-2000, iBaldur kunye nesango le-2 lilizwe elikhulu le-isometric ukuba liphonononge kwaye lilungele iipilisi. Yaziwa ngeeyure ezingama-300 zomdlalo weqonga (kuthatha iinyanga neenyanga ukugqiba), ulawula iqela labalinganiswa abathandathu. Iyelenqe lisetelwe kwiiNdawo ezilityelweyo apho unezilo ezikhulu kunye nomlingo, kwaye konke kwenzeka emva kweziganeko zeBaldur yokuqala kunye neSango leApos: iqhawe kunye nepati zithinjiwe, iqhawe lakho livuka ehokweni kwaye lizama ukubaleka kwi-wizard engendawo uJon Irenicus.
Baldur kunye nesango 2
# 6: I-Banner Saga
I-viking-ephefumlelweyo ye-RPG yeqhinga, i-Banner Saga ikubonisa ngendawo ye-2D yokulwa ngesandla, ngaphezulu kwama-25 abalinganiswa kwiiklasi ezisixhenxe ezahlukeneyo, kunye nomdlalo wokudlala olungeleleneyo kakuhle apho izigqibo zakho zinempembelelo enkulu ebalini.
# 5: Imiphefumlo ephambukileyo
Ixabiso: $ 6.99: Khuphela kwi ios , I-Android
Imiphefumlo ephambukayo ngumdlalo we-adventure owenzelwe ukudlala ngokukhawuleza kunye nexabiso elikhulu lokudlala kwakhona. Kwakukhuthazwe nguSpelunky, Imfihlo kaMana, kunye nomdlalo wethu wangaphambili, Mage Gauntlet. Ngokwenkqubo eveliswe ngokungahleliwe kuthetha ukuba ngalo lonke ixesha udlala umdlalo, ngamava ahlukileyo. Kwimiphefumlo engalunganga, ulawula omnye wabalinganiswa abathandathu, bonke benendlela zabo zokudlala ezizodwa, ubuchule kunye nezixhobo.
# 4: Myalelo kunye ne-Chaos kwi-Intanethi
Ukuba ufuna iMMORPG yokuntywilisela njengeHlabathi leMfazwe kwifowuni yakho, i-Order kunye ne-Chaos yeyona ndlela ilungileyo yokuhamba kunye noluntu oluphithizelayo lwabadlali, kunye nomhlaba olinganisiweyo olungeleleneyo wehlabathi kunye nabalinganiswa aba-5 ohlukeneyo onokukhetha kubo (i-Elves kunye nabantu ulwe i-Order, i-Orcs kunye ne-Undead ye-Chaos, kwaye ii-Mendels azithathi cala). Ukhetha isini sakho, inkangeleko, iklasi kunye netalente, kwaye unokuqokelela ukuya kuthi ga kwizakhono ezingama-2,500 kwaye ufumane ubuninzi bezixhobo ezingama-5,000.
Myalelo kunye neengxabano kwi-Intanethi
# 3: Ilifa lemfazwe
I-Battleheart Legacy ikuvumela ukuba uphonononge umhlaba ocebileyo nonengcaciso, yenza iqhawe lakho elikhethekileyo libe nezakhono ezininzi kunye nezinto, ulwe nemikhosi yeentshaba, udibane nabalinganiswa abangaqhelekanga kwaye ufumane amabali ombuso onengxaki. Kukuwe ukuba ukhethe ukuba uya kuba yi-wizard enamandla, okanye i-rogue eyaziwayo.
# 2: Dragon Quest V
Ixabiso: $ 14.99: Khuphela kwi ios , I-Android
I-Dragon Quest V kukholelwa ngokubanzi ukuba ngowona mdlalo ubalaseleyo kuthotho lweDrink Quest enebali elinzulu nelisakhula, kunye nenkqubo yemfazwe esekwe ebhodini apho uqengqa idayisi ukuze ubone isiphumo.
Injoka yokufuna V
# 1: Final Fantasy VI
Ixabiso: $ 15.99: Khuphela kwi ios , I-Android
'Imfazwe yamaMagi yashiya umlotha kunye nosizi ekuvukeni kwayo. Kwanomlingo ngokwawo wawuphelile ehlabathini. Ngoku, kwiminyaka eliwaka kamva, uluntu luye lwaphinda ilizwe lisebenzisa amandla esinyithi, umpu, iinjini zomphunga, nobunye oomatshini kunye neetekhnoloji. Kodwa kukho umntu onamandla alahlekileyo omlingo- intombazana encinci egama linguTerra obugcinwe bubukhoboka bobukumkani obubi kumzamo wokusebenzisa amandla njengesixhobo. Oku kukhokelela kwintlanganiso emnandi phakathi kweTerra kunye nomfana ogama linguLocke. Ukuphuncuka kwabo kabuhlungu kwi-Empire & apos; clops kubeka uthotho lweziganeko ezichaphazela ubomi obungenakubalwa kwaye zikhokelela kwisiphelo esinye esingenakuphepheka. '
Ndibonise indlela ekhawulezayo egodukayo
owona mboniso ubalaseleyo kwifowuni
I-iphone 12 pro max yokunyusa iselfowuni
Yeyiphi ifowuni enezona zithethi zibalaseleyo? I-iPhone vs Galaxy, i-OnePlus, i-LG, iPixel, kunye ne-ROG yefowuni yovavanyo oluyimfama
Uyisebenzisa kanjani i-SQL Drop, iTruncate kunye nokucima iiNgxelo
Ixabiso le-OnePlus 3T kunye nomhla wokukhutshwa
Ungasicwangcisa njani isicwangciso sosapho soMculo kuGoogle
Okokuqala 'Usetyenziso lweSoftware yasimahla yeVeki' liXesha leMfazwe-kwiXesha loTyelelo
Ikhamera ye-iPhone 7 Plus yomzobo vs ikhithi yekhamera eyi- $ 1600: yeyiphi ethatha iifoto ezingcono?
Umkhuseli wokuqala we-S6 weglasi yesikrini ekhuselayo uyabethwa ngevidiyo